नेपाल–ब्राजिल परामर्श संयन्त्र स्थापना
काठमाडौँ, १२ माघ । नेपाल र ब्राजिलबीच पहिलो पटक परराष्ट्र सचिवस्तरमा परामर्श संयन्त्रको बैठक भएको छ । ब्राजिलको राजधानी ब्रासिलियामा आज सम्पन्न बैठकमा नेपाल–ब्राजिल सम्बन्धका समग्र पक्षबारे विचारविमर्श हुनाका साथै पारस्परिक ..
‘नेपाल बङ्गलाबन्धु पुस्तकालय’ स्थापना
काठमाडौँ । नेपाल बङ्गलादेश मैत्री सङ्घले कामपा–१०, मध्य बानेश्वरस्थित चेल्सी इण्टरनेशनल एकेडेमीमा ‘नेपाल बङ्गलाबन्धु पुस्तकालय’स्थापना गरेको छ । पुस्तकालयमा अंग्रेजी र बङ्गाली भाषाका करिब १५० शीर्षकका साहित्य, शिक्षा, कूटनीति, संस्कृतिलगायत विषयका ..
उपराष्ट्रपतिसँग अष्ट्रेलिया र श्रीलंकाका राजदूतको शिष्टाचार भेटभाट
काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनसँग नेपालका लागि अष्ट्रेलिया र श्रीलंकाका राजदूतले शिष्टाचार भेट गरेका छन् । आज (शुक्रबार) अपरान्ह उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, बहादुरभवन कान्तिपथमा उपराष्ट्रपतिसँग अष्ट्रेलियाका राजदूत पिटर बड र श्रीलंकाका ..
विन्टर ओलम्पिकमा उत्तर र दक्षिण कोरियाले साझा झण्डामा मार्च गर्ने
काठमाडौं, ४ माघ । आउँदो फेब्रअरीमा हुने विन्टर (शीतकालीन) ओलम्पिकमा उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरियाले साझा झण्डा लिएर मार्च गर्ने भएका छन् । सीमावर्ती गाउँ पान्मुन्जोममा भएको दुई कोरियाका उच्च ..
काठमाडौं, २६ पुस । नँया बर्षको शुभकामना ! विश्वका अन्य देशजस्तै पाकिस्तानमा पनि आफ्नो हिसाबले नयाँ वर्ष मनाइन्छ । बन्दुकको शौखिनहरु आकाशमा गोली पड्काउछन् भने रक्सी पिउने मान्छे मँहगो सस्तो आफ्नो ..
यसकारण डोनाल्ड टर्म, सि चिनफिंग, पुटिन र किम जोन उन, २०१७ का विश्वका चार चर्चित नेता
तमारा गिल बीबीसी विश्व सेवा चर्चित नेताGetty Images सन् २०१७ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनल्ड ट्रम्प निर्वाचित भए भने अमेरिकी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर कोरियाले लगातार बलिस्टिक क्षेप्यास्त्रको परीक्षण जारी राख्यो। ..
भारतीय महावाणिज्यदूतले प्रचण्डलाई भेटे
चितवन, ११ पुस । वीरगञ्जमा कार्यरत भारतीय महावाणिज्यदूत बीसी प्रधानले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर चुनावा जितेकोमा बधार्इ दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड चितवनमा रहेको मौका पारेर आइतबार साँझ महावाणिज्यदूत ..
किन आयो चिनिया टोली नेपाल ?
काठमाडौँ ११ पुस । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको अध्ययन गर्न चीनको ल्हासास्थित आर्थिक तथा प्राविधिक विकास क्षेत्रका विज्ञ टोली नेपाल आइपुगेका छ । झापाको दमकमा ‘चीन नेपाल यू ई इन्डस्ट्रियल पार्क’ निर्माणका ..
पुष ८ छन्तु (चीन) । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपालसम्बन्धी पहिलो अन्तरराष्टिय फोटोग्राफी प्रतियोगिता चीनको प्रसिद्ध सहर छेन्दुमा जारी रहेको छ । प्रतियोगितामा भाग लिन नेपाल भ्रमणमा जाने पहिलो चिनियाँ फोटोग्राफी ..
काठमाडौं, ७ पुस । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेकामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई दिनुभएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री देउवालाई टेलिफोन गरी ऐतिहासिक ..